တရုတ်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားနေ့ကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်က ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းဖော်ပြ - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန် ၊ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီဘလင်ကန်က အောက်တိုဘာ ၁ ရက် တွင်ကျရောက်သော တရုတ်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားနေ့အပေါ် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။“အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှာ ကျရောက်မယ့် သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားနေ့ကို တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ(CRC) က ပြည်သူတွေအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုယ်စား ကျွန်တော့်ရဲ့ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမှုကို ပြောကြားလိုပါတယ်” ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဘလင်ကန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ် ၊ လာမယ့်နှစ်မှာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းဖို့ ၊ ပျော်ရွှင်သာယာဖို့နဲ့ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့ကို ကျွန်တော်တို့ဆုမွန်းကောင်းတောင်းပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်(သောကြာနေ့)သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်သည့် ၇၂ နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အခါသမယမဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
WASHINGTON, Sept. 30 (Xinhua) — U.S. Secretary of State Antony Blinken on Thursday extended congratulations on China’s National Day, which falls on Oct. 1.
“On behalf of the United States of America, I would like to extend our congratulations to the people of the People’s Republic of China (PRC) as the country celebrates its National Day on October 1,” Blinken said inastatement released by the State Department.
“As the United States seeks to work cooperatively to solve the challenges we all face, we wish the people of the PRC peace, happiness, and prosperity over the coming year,” he added.
This Friday marks the 72nd anniversary of the founding of the PRC.
A screenshot taken from the official website page of the U.S. Department of State on Oct. 1, 2021 showsapress statement by U.S. Secretary of State Antony Blinken.